Iyo Logitech Combo Bata keyboard kesi ne trackpad ikozvino inogona kuchengeterwa iyo nyowani iPad Pro 2021 | IPhone nhau
Logitech ndeimwe yemhando dzatinofarira zvakanyanya kana zvishandiso zviripo zveApple nekuda kwekukosha kwazvo kwemari. Mune ino kesi ndeye Logitech Combo Kubata Trackpad Nyaya, iyo yave kuwanikwa yekuchengetedza mumamirioni e12,9-inch yakaratidzwa munaEpril apfuura.
Logitech keyboard inovhara hapana mubvunzo sarudzo yekutarisa kana isu tichifunga nezve kutenga urwu rudzi rwezvishongedzo zveiyo yedu nyowani iPad uye zviri izvo kuchengetedza mari uye mhando yezvinhu zvinoshandiswa mune aya marudzi ezvigadzirwa zveLogitech ivo chaizvo sarudzo yakanaka kwazvo.
Pasina mubvunzo kutaura, iyi nyowani Logitech Combo Kubata kesi iri mumakwikwi akanangana neApple's Magic Keyboard. Apple inotengesa $ 349 uye iyi nyowani keyboard uye Trackpad kesi ine mutengo wakanyanya une $ 230.
Vazhinji uye zvakasiyana kutarisa maangles ekuisa iyo iPad Pro, tsigiro yeApple Penzura, backlit makiyi, nekukurumidza kuwana pane mamwe emakiyi aya, inoshanda chaizvo Trackpad uye pamusoro pezvose mhando yezvinhu inonyatsokodzera 12,9-inch iPad Pro ndomamwe mabhenefiti eiyi kodhi chivharo. Izvi zvirokwazvo zvisiri kuverenga kuti mutengo unodhura zvakanyanya kupfuura izvo izvo Apple zvinotipa mune yayo keyboard kodhi.
Chishongedzo ichi chakabatanidzwa zvine hungwaru kuburikidza neakachenjera chinongedzo pane iyo Pro Pro, zvakare zvine musoro zvakabatanidzwa zvisina waya saka hatizove netambo kuburikidza kana chero chinhu chakadai Izvo chete zvakashata ndezvekuti iyi keyboard iriko chete inowanikwa preorder muUnited States uye izvozvo inongowanikwa chete mune grey, zvimwe zvese zvinobatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Iyo Logitech Combo Kubata keyboard kesi ne trackpad ikozvino inogona kuchengetwa iyo nyowani iPad Pro 2021